အိုက်ပွဲပြီးအဲဒီမှာရရန်မည်သို့ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အိုက်ပွဲပြီးအဲဒီမှာရရန်မည်သို့
အဆိုပါ Cologne ပွဲတော်ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းဖြည့်စွက်ရကျိုးနပ်သည်. 1.5 နှစ်စဉ်နီးပါးတက်ရောက်သူသန်းချီ, သဘောတူ! ထို့အပြင်ပဉ္စမ-ရာသီအဖြစ်လူသိများ, ဒီကမ္ဘာကျော် ပွဲတော် တစ်သက်တာ အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။. အဆိုပါ Cologne ပွဲတော်သာပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်လည်း စူပါလွယ်ကူပါတယ် ရထားရ, အကူအညီဖြင့်ကယ်ရထားမွာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးချက်များ အဆိုပါ Cologne ပွဲတော်ဘို့ 2019 နှင့်မည်သို့ရထားအဲဒီမှာရဖို့.
အဘယ်အရာကို Cologne ပွဲတော်ဘို့ Pack ရန်:
ဒါဟာဝတ်စုံသွားကြဖို့အချိန် စျေးဝယ်. ဘယ်သူကမှ ၀ တ်စုံကိုမကြိုက်ဘူး? အဆိုပါစတိုင်ဘရာဇီးကျင်းပတဲ့ပွဲတွေကနေမဟုတ်ဘဲကွဲပြားခြားနားသည်. မိတ်ကပ်နှင့်အ sequins တစ်မိုးသည်းထန်စွာထိုးပိုမို "Prussian Soldier" စဉ်းစားပါ!
Cologne ပွဲတော်ကြီးဖန်စီစားဆင်ယင်အပေါငျးတို့သတဲ့ပွဲတော်အထက်တွင်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးပါ! အဆိုပါတောက်ပပိုကောင်း.
ဘောလုံးနှင့်အခြားမိုးလုံလေလုံဖြစ်ရပ်များအတွက်, ပါးလွှာသောဝတ်စုံအကြံပြုကြသည်. သင်အမှန်တကယ်လိုလျှင် အတှေ့အကွုံ ဒီပွဲတော်, ပြီးနောက်သင်အပြင်ဘက်သွားကြဖို့လိုအပ်! ရုံအောက်မှာပူနွေးတစ်ခုခုဝတ်ဆင်ဖို့သတိရပါ! စစ်မှန်သော Cologne ပွဲတော်ပန်ကာအားဖြင့်ပယ်ရှားခြင်းမရှိပါ ရာသီဥတု! ပြီးခဲ့သည့်တစ်မိနစ်မှာရောက်လာသူကိုဧည့်သည်များမျက်နှာဖုံးများကိုတွေ့လိမ့်မည်, ဝတ်စုံ, နှင့်လုပ်-Up အများအပြားစတိုးဆိုင်များအတွင်းရှိမြို့လယ်မှာရှိတဲ့. နောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်, ရိုးရှင်းတဲ့အနီရောင်စက္ကူနှာခေါင်းကိုသင်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည်. ယူဦးမလား စားဆင်ယင်အချက်အလက်.
သငျသညျ, Cologne ရဲ့တစ်ဦးရထားဖမ်းချင်တာပေါ့ အဓိကဘူတာရုံ. ဤသည်ကိုလည်းဥရောပရဲ့အရေးအပါဆုံးမီးရထားလမ်းအချက်အချာတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင် SaveATrain အတူသင်တို့ကိုက်ညီမယ့်အချိန်ကိုရှာဖွေတိုက်ဖျက်မည်မဟုတ်.
သငျသညျဂျာမနီမှာအဓိကမြို့ကြီးများနှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများတွင်အလျင်အမြန်နဲ့အငြိမ့်သည့် Cologne ပွဲတော်သွားရောက်နိုင်ပါတယ်: နေ့တိုင်း, ထက်ပိုပြီး 1,300 Cologne နှင့်အကြားကို run ရထား ခရီးစဉ် ဂျာမနီတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ပြည်ပမှာ. အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည်နှင့်အတူ Cologne ချိတ်ဆက်နိုင်ငံတကာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများပါဝင်သည် လန်ဒန်, ပဲရစ်, အမ်စတာဒမ်, နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်. နှင့် မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှု Frankfurt မှ, Koln-Deutz မီးရထားဘူတာ - ဒုတိယအတွက်ဆိပ်ကမ်း မြန်နှုန်းမြင့် ICE ရထားများ Cologne - နှင့် Cologne / Bonn လေဆိပ် ဘူတာရုံ, Cologne ရထားလမ်းများအတွက်ဗဟိုအချက်အချာအဖြစ်က၎င်း၏အရေးပါသောအအခန်းကဏ္ဍထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ် တင်ဆောင်.
Cologne အတွက်ဒေသခံလူထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသကိုလည်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, featuring မွေအောကျ, ဓါတ်ရထား, နှင့် ဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများ ကြောင်း Cologne ၌သင်တို့၏နေထိုင်စဉ်အတွင်းအကောင်းဆုံးရွေ့လျားခြင်းနှင့်တကွသင်ပေးပါလိမ့်မယ်.
ကပံ့ပိုးပေးထားသည့်အချက်အလက်များကို ဂျာမန်မီးရထားမီးရထား ကုမ္ပဏီရထားအချိန်ဇယားမသာပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းလမ်းရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယားပေါင်းခြေလျင်အနီးဆုံးမှတ်တိုင်သို့မဟုတ်ဘူတာရုံရောက်ရှိရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ကိုဆက်သွယ်ထားသော.
အဆိုပါနားလည်သဘောပေါက်ရန် “ထူးဆန်း” Cologne ပွဲတော်ကြီးယဉ်ကျေးမှု, သင်Kölschစကားကနေအနည်းငယ်ပုံမှန်အသုံးအနှုန်းတွေကိုသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့သည်သင့်အသစ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ဂျာမန်ကျွမ်းကျင်မှုသံသယမစတင်ပါဘူး – အများဆုံးဂျာမန်ဖြစ်စေသူတို့ကိုမသိရပါဘူး.
Fastelovend, သို့မဟုတ်: Fasteleer
ပျြောပှဲသဘငျ, ထို့အပြင်အဖြစ်လူသိများ “ပဉ္စမရာသီ,” အများဆုံး Cologne ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုကဲ့သို့အထူးအရပျကိုရရှိထားသူ ဒေသခံများက သူတို့ကအဘို့များစွာသောစကားရှိသည်. ပွဲတော်ကြီးပေမယ့်, သို့မဟုတ် “Fastelovend,” နိုဝင်ဘာလအပေါ်စတင်ဆိုပါတယ် 11 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, တကယ် “ကြီးမြတ်ရက်ပေါင်း” Ladies နှင့်အတူစတင်’ ည, သို့မဟုတ် “Weiberfastnacht” ကြာသပတေးနေ့ကမီနှင့် Ash ကို၏အရုဏ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိပြေး.
Kölsch: ဒါဟာသင်မသောက်ရနိုင်မှသာဘာသာစကားင်. ဒါက Cologne အတွက်အပြေးပေးနေရတာကိုင်, ဘယ်မှာစကားနှင့်ဇာတိမြို့ဘီယာအရက်ချက်အမည်တူဝေမျှ. ပုံမှန်အားဖြင့်အရပ်ရှည်ရှည်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်, သေးသွယ်မျက်မှန်, Cologne ပွဲတော်ကြီးအတွင်းမှာမကျိုးပဲ့လွယ်သောဖန်လမ်းပေါ်မှာခွင့်ပြုမှသာအဖြစ်ပလပ်စတစ်ခွက်ရဲ့. သင်တစ်ဦး Brauhaus မှာKölschဖမ်းပြီးသင့်တယ်, သော်လည်း, သတိရ: ငွေသားကိုယူခဲ့. ဒါဟာလူမှုအဖွဲ့အတွက်သောက်စရာလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ခြင်းငှါတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းင် အရက်ဆိုင်.
တစ်ဦးက “Butzcher” ကြီးမားတဲ့ smooch ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Cologne ပွဲတော်ကြီးပွဲတော်ကာလအတွင်း, နမ်းရနျမြျှောလငျ့ (“gebutzt,” သို့မဟုတ်မှန်ကန်သောဖြစ်: “jebutz”) ပုံမှန်အတိုင်းထက်ပိုပြီး. ပြည့်စုံသော သူစိမ်း သူစိမ်းအပေါ်အန္တရာယ်ကင်း Peck ဖြန့်ဝေ’ ပါး, အခြို့သောစိုစွတ်သော Butzcher သော်လည်း (စံKölschအတွက်, “Butz”) လည်းအားလုံးကိုသင်၏မျက်နှာပေါ်မှာပွဲတော်ကြီးမိတ်ကပ် smudge စေခြင်းငှါ.
ဤသည်မှာစကားလုံးအရက်ဆိုင်ကိုရည်ညွှန်းသည်, ဘား, သို့မဟုတ် စားသောက်ဆိုင်. အားလုံးနီးပါးကသူတို့ကို၏, Cologne ပွဲတော်ကြီးကျင်းပနေအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ. သူတို့ကတတန်းအတွက်အခမ်းအနား၏ခြောက်ရက်ပတ်လုံးများအတွက်ကြီးမားသောအကအခုန်အထပ်ဖန်တီးရောင်စုံအရာအားလုံးအလှဆင်ဖို့ပရိဘောဂထုတ်ရှင်းလင်း. အများအပြားသည်ဒေသခံအရက်ဆိုင်များတွင်, သာKölsch ဂီတ ကစားနေသည် (အဆိုပါKölschစကားသီချင်းဆို). သငျသညျမကြာခဏများ၏ရှေ့မှောက်၌ 300 မီတာရှည်လျားစီတန်းမှတက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ရိုးရာအရက်ဆိုင်.
နံနက်စောစော, လမ်းများဝတ်စုံအတွက် Cologne ပွဲတော်အရူးအတူတက်ဖြည့်ပါ. မှာအတိအကျ 11:11 နံနက်။, လမ်းပေါ်မှာပွဲတော်ကြီးတရားဝင် Cologne နှင့် Cologne ရဲ့ပွဲတော်ကြီး triumvirate ၏မြို့တော်ဝန်အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်မှန်: အမြိုးသမီးမြား (အမြိုးသမီးမြား)
တွင် 1824 Beuel အတွက်, Bonn ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, အဝတ်လျှော်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် Karneval ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်. ဒါဟာတခြားလူတိုင်း Karneval ကျင်းပနေစဉ်သူတို့ရေချိုးခန်းလုပ်နေတာငြီးငွေ့ခဲ့ကြပုံရသည်. သူတို့ဟာ Town Hall ဝင်စီးပြီးနှင့်မြို့အစိုးရလွှဲပြောင်းယူ. (အခုတော့သတိရ ... Karneval အစိုးရအရာရှိများပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး caricatured ကြသောအခါအချိန်ဖြစ်ပါသည်, ကာလှောင်ပြောင်အစိုးရရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့တွင်, အမြိုးသမီးမြားဖွငျ့ဤ "ကို Beuel Town Hall ၏မုန်တိုင်း" ရုပ်မြင်သံကြားတိုက်ရိုက်ပြသ. မိန်းကလေးတစ်ဦးကို Power!
မတ်လ 1: ပွဲတော်ကြီးသောကြာနေ့
ဤသည်နေ့ရက်သည်အမှန်တကယ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောနေ့ဖြစ်၏. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သိပ်အလေးအနက်ထားဒီယူမှာမဟုတ်ဘူး. မြောက်မြားစွာအစည်းအဝေးများနှင့်ဘောလုံးဒီနေ့၌ညဦးယံ၌နေရာတစ်နေရာယူ. ဒါကြောင့်သင်လိုသောအနေလျှင် ပါတီ, သငျသညျတစျဦးကိုရှာဖွေရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်.
မတ်လ 2: ပွဲတော်ကြီးစနေနေ့
Kölschအတူပွဲတော်ကြီးမနက်လည်စာပြီးနောက် ဘီယာ, အဆိုပါ Neumarkt မှာစစ်တပ်အစဉ်အလာနှင့်အတူပွဲတော်ကြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ bivouac မှာစွမ်းဆောင်ရည်လည်းမရှိ. ည ဦး ယံ၌သငျသညျ Ghost Parade ကိုသွားနိုင်ပါတယ်.
မတ်လ 3: ပွဲတော်ကြီးတနင်္ဂနွေ
မှာစတင်ခြင်း 11:11 နံနက်။, ကျောင်းနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းစစ်ရေးပြ မတ်လ မြို့လယ်ကတဆင့်, ရပ်ကွက်အတွင်းကလပ်အသင်းများကဆန္ဒပြဝတ်စုံကျောင်းမှအဖွဲ့များနှင့်မူရင်း masquerades featuring.
မတ်လ 4: နှင်းဆီတနင်္လာနေ့
အဲဒီ session ၏မြင့်အမှတ်နှင်းဆီတနင်္လာနေ့ကြီးတွေချီတက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ Float မှာမြို့မှတဆင့်ချီတက်ပွဲစတင် 10 နံနက်. သင်တန်းသားများချီတက်ပွဲလမ်းကြောင်းတန်းစီသည့်ဝတ်စုံလူအုပ်ကြီးမှအနမ်းမှုတ်.
မတ်လ 5: ပွဲတော်ကြီးအင်္ဂါနေ့
မွန်းတည့်အချိန်၌မြို့ဆင်ခြေဖုံးများတွင်ဝတ်စုံဗျာဒိတ်ကျမ်းအုပ်စုများနှင့်အတူစစ်ရေးပြရှိပါတယ်. ပြီးနောက်, အဆိုပါပွဲတော်များသန်းခေါင်တိုင်အောင်သွား, သည် "Nubbel" ဟုခေါ်သည့်ကောက်ရိုးပုံကိုသင်္ဂြိုဟ်သို့မဟုတ်ကိုမီးရှို့သောအခါ.
မတ်လ 6: ပြာဗုဒ္ဓဟူးနေ့
မနက်ခင်းမှာ, ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကိုသွား လက်ခံရရှိရန်တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပြာပေါ်သူတို့ရဲ့ foreheads၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်ဆန့်ကျင်ဘက်. ထိုညနေတွင်, ယခုနှစ်ရဲ့ပွဲတော်ကြီးရာသီအစဉ်အလာငါးညစာမှာကောက်ချက်ချနေသည်.
Cologne ပွဲတော်တက်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့စည်းရုံးပြီးပြီလား 2019, သေး? သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေဖမ်းပြီးကနေ Sava တစ်ဦးကရထား အဘယ်သူမျှမပိုနှင့်အတူမိနစ်၌, ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အဖိုးအခ! This means more money for Weetschaff ?
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcologne-festival%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#CologneFestival #koln europetravel ပွဲတော် longtrainjourneys trainjourney travelcologne traveltips